ကုန်ကြမ်း Sunifiram အမှုန့် (314728-85-3) ထုတ်လုပ်သူများ - Phcoker Chemical
Sunifiram (DM-235) အမှုန့်သည် nootropics အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မှတ်ဥာဏ်၊ သင်ယူခြင်း၊ စိတ်ဓာတ်မြှင့်တင်ခြင်းဖြင့်ထူးခြားသောဖန်တီးမှုရှိသော piracetam ဖြစ်သည်။
ကုန်ကြမ်း Sunifiram အမှုန့် (314728-85-3) ကဗီဒီယို
ထို့အပြင် DM-235 အဖြစ်လူသိများကုန်ကြမ်း Sunifiram အမှုန့်, သိမှတ်ခံစားမှုတိုးမြှင့်ဖြည့်စွက်အတွက်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်အသစ်များကိုဖှံ့ဖွိုးတိုးတဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ nootropics racetam မှဖွဲ့စည်းပုံဆင်တူပေမယ် piracetam. ထက်အကြောင်းကို 1,000 ကြိမ်အားကောင်း
ကုန်ကြမ်း Sunifiram အမှုန့်အချိုမှု receptors တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်အားဖြင့်၎င်း, acetylcholine.It ကုန်ကြမ်း Sunifiram အမှုန့်ရဲ့မူလတန်းလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖြတ်ကျော်ပြီးနောက်ဆိုလိုတာကတစ်ခု ampakine ၏ကြောင်းကြောင်းယုံကြည်ရသည်ကို "သင်ယူခြင်း neurotransmitter" ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ချိတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်မဖြစ်မှလူသိများသည် အဆိုပါ brain.This ထဲမှာ AMPA-type အမျိုးအစားအချိုမှု receptors မှချည်နှောင်သွေးသည်ဦးနှောက်အတားအဆီးအချိုမှုများ၏ထုတ်လုပ်မှု, အာရုံကြော activation အတွက်အရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍတစ်ခုအရေးပါသောအ neurotransmitter လှုံ့ဆော်။
အချိုမှု Synaptic plasticity အရေးပါကြောင်းတစ်ခု excitatory neurotransmitter ဖြစ်ပါသည်, သို့မဟုတ် activity.Raw Sunifiram အမှုန့်ထဲမှာတိုးသို့မဟုတ်လျှောက်လျော့နည်းတုံ့ပြန်ရန်အာရုံကြော synapses များ၏စွမ်းရည်ကိုလည်း neurotransmitter acetylcholine ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ချိတိုးမြှင့်တစ် cholinergic အဖြစ်ဆောင်ရွက်ရန်ထင်နေသည်။
ကုန်ကြမ်း Sunifiram အမှုန့် (314728-85-3) S ကpecifications
ထုတ်ကုန်အမည် ကုန်ကြမ်း Sunifiram အမှုန့်
ဓာတုအမည် DM-235,1- (4-benzoylpiperazin-1-yl) ပရိုပိန်း-1-One, Piperazine
အမှတ်တံဆိပ် NAmE ကုန်ကြမ်း Sunifiram အမှုန့်, DM-235
CAS အရေအတွက် 314728-85-3
InChIKey DGOWDUFJCINDGI-UHFFFAOYSA-N ကို
မော်လီကျူး Formula C14H18N2O2
မော်လီကျူး Wရှစ် 246.304 ဂရမ် / mol
အရည်ပျော် Point 98-100 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
Freezing Point ရရှိနိုင်သည့်အချက်အလက်မရှိပါ
ဇီဝဗေဒတစ်ဝက်-ဘဝ 4.5-6.5 နာရီ
Solubility , လုံခြောက်သွေ့လေဝင်လေထွက်
Application Memory တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်ခြင်း၊ သင်ယူခြင်းတိုးတက်ခြင်းနှင့် Pain Sensitivity လျှော့ချခြင်းစသည်ဖြင့်
ကုန်ကြမ်း Sunifiram အမှုန့် (314728-85-3) ဖျေါပွခကျြ
Sunifiram (DM-235) ဒါဟာ nootropics racetam မှဖွဲ့စည်းပုံဆင်တူပေမယ် piracetam ထက်ပိုမိုအားကောင်း 1,000 ကြိမ်လောက် ampakine ကဲ့သို့မူးယစ်ဆင်းသက်လာတဲ့ piperazine ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အပေါ်အနည်းငယ်သာသုတေသနလက်ရှိတွင်ရရှိနိုင်ပါသည်, ဒါပေမယ့်ပဏာမတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကအလွန်အမင်းထိရောက်သော nootropic အဖြစ်အယ်လ်ဇိုင်းမားရောဂါအပါအဝင်ဦးနှောက်အာရုံကြောရောဂါအမျိုးမျိုးများအတွက်အလားအလာကုသမှု, ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့် amnesia. ဖြစ်မည်အကြောင်းညွှန်ပြ
Sunifiram ပထမဦးဆုံး Italy. သုတေသနအတွက် Firenze တက္ကသိုလ်မှသိပ္ပံပညာရှင်များအားဖြင့် 2000 အတွက်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ် sunifiram အမှုန့်အလွန်နိမ့်ဆေးများအတွက်ယူလျှင်ပင်ဦးနှောက်ပါဝါ, ခံစားချက်, နှင့်စွမ်းအင်မြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါအကြံပြုထားသည်။
Sunifiram အမှုန့် (314728-85-3လှုပ်ရှားမှု၏) ယန္တရား
sunifiram ၏လုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရားမသိပေမယ့်အချိုမှု receptors တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုလှုံ့ဆော်ခြင်းဖြင့်နှငျ့ "သင်ယူခြင်း neurotransmitter" acetylcholine ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ချိတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အလုပ်မဖြစ်မှလူသိများသည်။
Sunifiram, NMDA ဟာအချိုမှု receptor ကိုလှုံ့ဆျော။ ဒါဟာအချိုမှု (က neurotransmitter) ဦးနှောက်အာရုံကြောဆဲလ်များအကြားကိုအပ်ထားတဲ့မှာနှုန်းတိုးပွားစေပါသည်။ ဤသည်ပျက်စီးသွားသောသို့မဟုတ်ခွဲစိတ်ပြောင်းလဲဦးနှောက်ထဲမှာမှတ်ဉာဏ် function ကို restore ကူညီပေးနိုင်ပါသည်။
Sunifiram အမှုန့်ကိုလည်း neurotransmitter acetylcholine ၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဖြန့်ချိတိုးမြှင့်။ Acetylcholine နီးကပ်စွာမှတ်ဉာဏ်, သင်ယူမှုအမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းရည်များနှင့်အရည်ထောက်လှမ်းရေးသို့မဟုတ်သင်ယူအပြုအမူတွေအပေါ်မှီခိုခြင်းမရှိဘဲထူးခြားတဲ့ပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့စွမ်းရည်အပါအဝင်အခြားသောကောင်းကျိုးအများစုကိုရှုထောင့်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား of Sunifiram အမှုန့် (314728-85-3)
သင်ယူခြင်းနှင့် Memory ပိုကောင်းစေပါတယ်
အာရုံစိုက်, Motivation နှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရှင်းလင်းမှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေနိုင်ပါစေ
တိုးမြှင့်လိင် drive ကို
အကြံပြုထားသည် Sunifiram အမှုန့် (314728-85-3) သောက်သုံးသော
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများကနေရရှိခဲ့အသုံးပြုသူအစီရင်ခံစာများနှင့်သတင်းအချက်အလက်ပေါင်းစပ်အပေါ်အခြေခံပြီး, 5-10 တစ်သောက်သုံးသောတစ်နေ့လျှင်သုံးကြိမ်ဦးရေအများဆုံးပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့် sublingually dosed တဲ့အခါမှာဒါဟာအကောင်းဆုံးအလုပ်လုပ်တယ် effective. စဉ်းစားသည်ကိုယူ MG ။
ဘေးထွက်ဆိုးကျိုး of Sunifiram အမှုန့် (314728-85-3)
ယခု၏အဖြစ်, သုတေသနသို့မဟုတ်သိပ္ပံနည်းကျအမြင်ကနေ sunifiram အမှုန့်များစွာသောဘေးထွက်ဆိုးကျိုးတွေဖြစ်အဲဒီမှာပေါ်လာပါဘူး။
user-အစီရင်ခံဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအသေးစားနှင့်ယာယီနှစ်ဦးစလုံးဖြစ်ကြပြီးတစ်ခုခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်တိုးတိုးမြှင့်ချွေးနဲ့ salivation ခြင်း, ခေါင်းကိုက်ခြင်း, နှာခေါင်းလှောင်တို့ပါဝင်သည်, အမြင်အာရုံနဲ့ audio ဆွဖို့ sensitivity ကိုနှင့်အိပ်မပျော်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ ဒါပေမယ့်ဘယ်သူမျှမကလူ့လေ့လာမှုများသို့မဟုတ်လက်တွေ့စမ်းသပ်မှုတွေကောက်ယူခဲ့ကြကြောင်းမှတ်မိဖို့အရေးကြီးပါတယ်။